Ntugharị gam akporo: akụkọ, mmelite, chinchi na ndị ọzọ | Gam akporo (Peeji nke 2)
Gam akporo nsụgharị
A na-etinye gam akporo 10 na ngwaọrụ 400 nde
Ihe oru ngo nke Google choro iji mee ka ngwa ngwa nke gam akporo di na ngwaọrụ dakọtara, enweela ihe ịga nke ọma dịka ọnụọgụ ọhụrụ ọ bipụtara.
Etu esi nye ikike iji nweta ikike iji nweta ọnọdụ ahụ na ndabere na gam akporo 11
Na gam akporo 11 a ga-enwe ikikere nke ngwa iji nweta ebe dị n'azụ, ihe dị ezigbo mkpa na nke ahụ na-emetụta.
8 ọhụrụ iOS 14 atụmatụ dị ugbu a na gam akporo
Site na ngosipụta nke ọrụ nke iOS 14, a manyere anyị iji atụnyere, nke ọrụ ọhụrụ dị ugbu a na gam akporo
Esi wụnye Android 11 Beta n'enweghị nsogbu na Google Pixel
Taa, anyị na-egosi gị otu esi etinye Android Beta gam akporo gị na Google Pixel ngwaọrụ na obere usoro ole na ole na nchekwa.
Ahụhụ dị na gam akporo nwere ike ime ka ụfọdụ ekwentị kwụsị ịzaghachi
A ahụhụ dị na gam akporo 10, o yiri ka ọ bụ onye na-akpata nsogbu na ụfọdụ ọnụ na gam akporo 10, na-akwụsị resonating kpamkpam mgbe ngwa dara.
Android 11 DP2 dị ugbu a, chọpụta ihe dị ọhụrụ na ụdị ndị nrụpụta
Versiondị nke abụọ maka ndị mmepe nke Android 11 dị ugbu a, ọ na-agbakwunye ọtụtụ ndozi karịa gam akporo 10. Mara onye ọ bụla n'ime ha.
Beta nke anọ nke gam akporo 10 maka Galaxy S9 na S9 + dị ugbu a
Na Disemba 20, ụmụ okorobịa nọ na Samsung malitere beta nke atọ nke gam akporo 10 na akwa nke ...
Android 11 ga - enye gị ohere ịhazi ọnọdụ gbara ọchịchịrị
Ọ gaghị adị ruo mgbe Android 11 mgbe ndị ọrụ gam akporo ga-enwe ike ịhazi ọrụ nke ọnọdụ gbara ọchịchịrị
Kpụrụ ụgbọ elu na gam akporo 11 agaghị arụ ọrụ bluetooth ma ọ bụrụ na anyị na-eji ya
Ruo afọ ole na ole, anyị nwere ikike ọ bụla na mkpanaka mkpanaka, n'agbanyeghị agbanye sistemụ arụmọrụ ya, ọnọdụ ụgbọ elu, ...
Chọpụta mba niile nke arụ ọrụ iji gam akporo Auto na-enweghị eriri amalite na Latin America dịka ekwuputala ya.
Xiaomi ekpughere ụbọchị MIUI 11 nke ekwentị dị iche iche
Chọpụta ihe banyere ụbọchị maka MIUI 11 iji ruo Xiaomi dị iche iche, Redmi na Pocophone ekwentị dị iche iche nke akararịrị egosiworị.
Ọ bụrụ n ’ọmarịcha aro ndị gam akporo 10 na-enye gị, adabaghị n’ihe ị na-achọ, n’isiokwu a anyị ga-egosi gị otu esi ehichapụ ha ka usoro ahụ wee bido.
Chọpụta ihe banyere mwepụta nke gam akporo 10 Gaa n'ahịa ahụ dịka Google na ọkwa ya na ọkwa ya.
Android TV 10 nwere ike ịbịa mgbe afọ a gasịrị
Chọpụta ihe banyere atụmatụ iji gosipụta gam akporo TV 10 tupu njedebe nke afọ dị ka mgbasa ozi dị iche iche si kọọ.
Android 10 betas maka Galaxy S10 na Rịba ama 10 iji malite na njedebe nke ọnwa
Akpa gam akporo 10 betas maka Samsung Galaxy S10 na Galaxy Note 10 nwere ike ịhapụrụ ya ọha na eze.
Chọpụta karịa maka ngosipụta nke Funtouch OS 9.1 nke Vivo na-akwado, nhazi usoro nhazi ọhụụ ga-abụ nke gọọmentị.
HarmonyOS adighi njikere maka ojiji na ekwenti
Chọpụta karịa banyere nkwupụta nke CEO nke Huawei na HarmonyOS adịghị njikere iji ya na ekwentị mkpanaaka n'oge a.
Chọpụta ihe gbasara ahụhụ a nke mere na ụfọdụ Google Pixels nke mere ka ihuenyo ụlọ kpoo mgbe ị na-emelite gam akporo 10.
Android 10 enweela ụbọchị ntọhapụ maka Google Pixel
Chọpụta karịa maka ụbọchị ntọhapụ nke gam akporo 10 maka Google Pixel ga-eme na mbido Septemba.
Chọpụta ihe banyere akụkụ ndị emetụtala Google mgbe ị na-ahọrọ gam akporo 10 dị ka aha sistemụ arụmọrụ ya.
Chọpụta karịa mkpebi Xiaomi iji kwụsị ịhapụ nsụgharị beta nke MIUI 10 na ọnwa a ma lekwasị anya na ọkwa ọhụrụ ya.
Chọpụta karịa gbasara HarmonyOS, sistemụ arụmọrụ nke Huawei nke enyerelarị na nke anyị maraworị ihe niile.
Gam akporo Q Beta 6 dị ugbu a iji wụnye
Chọpụta ozi ọma anyị hụrụ na beta nke isii nke gam akporo Q na eze yana na Google Pixel nwere ike ịnwale.
Beta ọhụrụ nke gam akporo Q kwụsịrị n'ihi nsogbu nrụnye
Chọpụta karịa nsogbu ndị bilitere na gam akporo Q beta nke Google kwesịrị ịkwụsị nwa oge.
Gam akporo Q beta nwere mmegharị ọhụụ imeghe Google Assistant
Chọpụta karịa ihe ngosi ahụ achọpụtara na gam akporo Q beta ekele nke enwere ike ịmeghe Google Assistant n'ụzọ dị mfe.
EMUI 9.1: Akụkọ niile ga-abịa n’ekwentị
Chọpụta atụmatụ ọhụụ niile, mgbanwe na ndozi niile ewepụtara na EMUI 9.1 nke a ga-ewepụta n’ọnwa a maka ekwentị Huawei na Honor.
Huawei kpughere ekwentị ndị ga-emelite EMUI 9.1
Chọpụta ihe banyere mwepụta nke EMUI 9.1 maka ngụkọta nke ekwentị ọhụrụ 18 ọhụrụ nke ga-abata na izu ndị a.
Chọpụta ihe oyiyi mbụ nke EMUI 10 nke a na-agbanyeworị na nzuzo ma ka anyị hụ atụmatụ nke oyi akwa ga-eji.
Gam akporo Q ga-enyekwu ọrụ maka ọdịdị ihu
Chọpụta karịa gbasara atụmatụ ndị ọzọ a ga-ewebata maka mmata ihu na gam akporo Q dị ka a hụrụ na beta nke anọ.
Ozi banyere iOS 13 na-eweta na anyị nwere ọ onụ na gam akporo ruo ogologo oge
Na ngosipụta nke iOS 13 ọ bụ ihe a na-apụghị izere ezere iji chọpụta nke bụ ọrụ ọhụrụ nke iOS 13 ndị dịlarị na gam akporo
Nke a bụ otu ihe dị mma desktọọpụ ọnọdụ nke ga-abịa site n'aka gam akporo Q anya
Ọrụ nke ọnọdụ desktọọpụ, otu n'ime akwụkwọ akụkọ ga-esi n'aka gam akporo Q, anyị nwere ike ịhụ ya na vidiyo a.
Chọpụta ihe banyere mkpebi Google iji wepụ Huawei Mate 20 Pro na nyocha nke gam akporo Q na-enweghị ọkwa.
Gam akporo R ga-ewebata ogologo screenshots
Chọpụta karịa gbasara iwebata screenshots agbatịkwuru na gam akporo R mgbe ịnweghị ike iji ha na gam akporo Q na eze.
Gam akporo Q na-enye ohere ịnweta echekwa netwọk Wi-Fi echekwara na-enweghị mgbọrọgwụ
Gam akporo Q na-enye anyị ohere ịnweta okwuntughe nke netwọk Wi-Fi nke anyị chekwara na-enweghị mgbọrọgwụ.
Huawei mara ọkwa ekwentị izizi iji nweta nkwalite gam akporo Q
Chọpụta ndepụta nke ekwentị nke akara ndị China ga-enwe ike ịnweta gam akporo Q dịka ụlọ ọrụ n'onwe ya gosipụtara.
Chọpụta ihe banyere data nkesa ọhụrụ nke Google bipụtara, nke gosipụtara ọganihu gam akporo Pie na ahịa na ọnwa ndị a.
Chọpụta akụkọ niile batara na beta nke atọ nke gam akporo Q nke emegoro na ngosipụta ya na Google I / O 2019.
Chọpụtakwuo banyere interface ọhụrụ nke ewepụtara na Wear OS na kaadị ma ọ bụ Taịlị ndị Google ekwuputala ọkwa.
Chọpụta ihe banyere ụdị gam akporo a nke Google ga-ebupụta maka ekwentị dị mfe yana nke nwere ike iru ahịa ahụ n'oge na-adịghị anya.
Kpughere ndepụta ekwentị nke ga-emelite EMUI 9.1
Chọpụta ihe banyere mmelite ahụ na EMUI 9.1, ụdị ọhụrụ nke akwa mkpuchi, nke a ga-ahapụ na ekwentị nke akara ndị China.
Chọpụta karịa banyere ọkwa Xiaomi na-ekwenye na ekwentị Redmi atọ agaghị emelite ya na gam akporo achịcha.
The OnePlus 3 na 3T enweta gam akporo 9 achịcha na Europe
Chọpụta ihe banyere mwepụta nke gam akporo Pie beta maka OnePlus 3 na 3T na Europe, nke amalitelarị ịfegharị.
Chọpụta ihe banyere ahịa ahịa nke gam akporo ruru na Spain, ebe ọ na-achịkwa karịa 90% na ahịa maka oge mbụ.
All ozi ọma nke abụọ beta nke gam akporo Q
Chọpụta akụkọ niile anyị hụrụ na beta nke abụọ nke gam akporo Q nke emegororịrị rụọ ọrụ maka Google Pixel.
Xiaomi kwadoro ụfọdụ atụmatụ nke MIUI 11
Chọpụta ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ nke Xiaomi gosipụtara na a ga-ewebata MIUI 11 na etiti afọ a.
10% nke Smart TV na-eji gam akporo TV
Chọpụta karịa banyere ahịa ahịa nke gam akporo TV nwere ugbu a na ihe na - eme ka ọ bụrụ ụdị eji na ahịa Smart TV.
Ọ dị mma maka Huawei, P10 ga-enweta Android 9
Huawei ga-emelite ụdị nke gam akporo 9 Pie kacha ọhụrụ, n'okpuru akwa ya EMUI 9, na P10 bidoro na 2017. Ka asọmpi ahụ mara.
Gam akporo Q ga-enwe mkpokọta nsụgharị beta isii
Chọpụta karịa gbasara beta ụdị niile gam akporo Q ga-enwe na ọnwa ndị na-abịanụ tupu mmalite ọrụ ya na nkeji nke atọ.
Osimiri Xiaomi na-esote nke ga-emelite na Android achịcha ekpughere
Chọpụta ndepụta nke Xiaomi smartphones nke ga-enwe ike ịnweta mmelite na gam akporo achịcha n'oge na-adịghị anya, dịka ụlọ ọrụ ahụ kwadoro.
Ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ dakọtara na beta nke gam akporo Q ga-adị ukwuu karịa Android P
Na Google I / O nke afo gara aga, Google kwuputara na gam akporo beta beta adighi adi na ...
Samsung Galaxy A8 + (2018) mmelite na gam akporo achịcha
Chọpụta ihe banyere mmelite ahụ na A gam akporo nke na-amalite iru Samsung Galaxy A8 + (2018) na Russia ma na-agbasawanye.
Xiaomi ga-ekpughere ụfọdụ ozi ga-abịakwute MIUI
Chọpụta atụmatụ nke ndị ọrụ Xiaomi nakweere ma webata ya na MIUI n'ọdịnihu dị nso, dịka ekwenyelarị.
Asus na-akwado ekwentị ndị ga-emelite gam akporo achịcha
Chọpụta ndepụta nke ekwentị Asus nke ga-enweta mmelite na Android Pie n'ime afọ a, nke ụlọ ọrụ ahụ kwadoro.
Gam akporo Q ga-achịkwa oge ị nọrọ na weebụsaịtị
Choputa ihe banyere ihe ohuru a ga-ewebata na gam akporo Q iji chịkwaa oge ole ị na-etinye na ibe weebụ.
The Galaxy S8 na-amalite mmelite na A gam akporo na Europe
Chọpụta ihe maka mmelite ahụ na A gam akporo nke na-amalite ịbata n'ụzọ kwụsiri ike na Galaxy S8 na mba ụfọdụ na Europe.
Ekwentị mbụ ga-emelite MIUI 11 kwadoro
Chọpụta ihe banyere ndepụta nke Xiaomi na Redmi smartphones nke ga-enwe ohere MIUI 11 na ọkara nke abụọ nke afọ a.
The Honor 8X mmelite ka a gam akporo na Spain
Chọpụta ihe gbasara mmelite ahụ na A gam akporo nke ewepụtarala maka Honor 8X n’ihu ọha na Spain na awa ole na ole gara aga.
Google kwuputara oge ndebanye aha maka Google I / O 2019
Ọ bụrụ n'ịchọrọ ịga Google I / O 2019, ị ga-esonye ọzọ na raffle iji nwee ike ịnweta tiketi ndị dịnụ, dị ka kwa afọ.
Onye OnePlus 5 na 5T na-enweta nsụgharị nke gam akporo Pie
Chọpụta ihe banyere mmelite ahụ na A gam akporo nke na-abịakwute OnePlus 5 na 5T nke anatalarị ụdị anụ arụmọrụ nke sistemụ arụmọrụ.
Akwụkwọ akụkọ EMUI 9.0 dị na Huawei P20 PRO. A gam akporo !!
Vidio nke m na-egosi gị ozi ọma nke EMUI 9.0 na Huawei P20 Pro, mmelite kachasị ọhụrụ natara nke na-emelite ya na A gam akporo.
Nokia na-ekpughe ụdị nke ga-emelite gam akporo Pie na ụbọchị ha
Chọpụta ekwentị Nokia na-enweta mmelite gam akporo yana ụbọchị ha na-enweta mmelite ahụ.
Sony malitere ịgbanye Android TV 8.0 na ọnụ ọgụgụ buru ibu nke telivishọn
Onye nrụpụta telivishọn Sony eweputara mmelite maka ụdị nke ụlọ ọrụ ahụ bidoro n'etiti 2016 na 2018 gam akporo 8.0
Otu esi eme ka ọnọdụ ndị ọbịa ma ọ bụ oghere nke abụọ na gam akporo
Anyị na-egosi gị otu esi arụ ọrụ Ọbịa ma ọ bụ Oghere Abụọ na gam akporo ekwentị gị: bulie nzuzo nke ngwaọrụ gị!
Ndị a bụ ekwentị Xiaomi nke ga-emelite na Android Pie
Chọpụta ihe banyere ndepụta nke ụdị Xiaomi ndị gosipụtarala mmelite ahụ na A gam akporo na ọnwa ndị na-abịanụ na ntọala siri ike.
Chọpụta ihe banyere mmelite gam akporo Pie maka Galaxy Note 9 na Galaxy S9 + na Spain nke amalitela itinye ya.
Xiaomi kwadoro na ha na-arụ ọrụ na MIUI 11
Chọpụta karịa MIUI 11, onye mmepe ya amalitelarị dịka nke Xiaomi n'onwe ya na akụkọ ya gosipụtara.
Google ga-eweta ihe achọrọ na gam akporo TV
Chọpụta karịa ihe ndị achọrọ na Google chọrọ ịmanye na ndị na-emepụta TV gam akporo iji nye ezigbo ahụmịhe onye ọrụ.
Gam akporo Q ga-emeghe usoro izipu ozi RCS na ndị mmepe nke atọ
Usoro RCS na-enye ohere ka baa ọgaranya na ozi ma ọ ga-adị na gam akporo Q mgbe ngwa izipu ozi ndị ọzọ nwere ike iji ya.
Google Pixels na-enweta mmelite nche nke Jenụwarị
Ihe Pixel Google n'ime ọgbọ ya atọ niile na-enweta ihe nchekwa maka ọnwa nke Jenụwarị, ma e wezụga nke Nexus.
Gam akporo Q nwere ike mechara rute na ọnọdụ gbara ọchịchịrị echere
Dị ọzọ nke gam akporo, Android Q, nwere ike ịbịaru aka na ọnọdụ gbara ọchịchịrị ogologo oge nke ọtụtụ ndị ọrụ na-echere ruo ọtụtụ afọ.
Ihe ngosi 9 Galaxy Note malitere imelite na Android Pie na Europe
Chọpụta ihe banyere mmelite kwụsiri ike nke ruru Samsung's high-end, the Galaxy Note 9 na-enwetakwa gam akporo Pie na Germany.
Fuchsia OS dakọtara na ngwa gam akporo
Chọpụta karịa maka ndakọrịta nke Fuchsia, sistemụ arụmọrụ nke Google na-etolite na ngwa gam akporo.
Ndị a bụ ndị nrụpụta gam akporo nke na-emelite mobiles ha ọtụtụ
Chọpụta ndepụta nke AOSMark kwadebere nke na-egosi ụdị ụdị dị na gam akporo bụ ndị kacha mma melite ekwentị ha ugbu a.
Asus ZenFone 5Z na-amalite mmelite na gam akporo achịcha
Chọpụta ihe maka mmelite gam akporo nke na-amalite ịpụta na Asus ZenFone 5Z na mba dịka Taiwan.
Chọpụta ụbọchị nke 9 Galaxy Note na-atụ anya ka ịnweta ụdị nkwụnye nke gam akporo dị ka Samsung gosipụtara.
Chọpụta karịa gbasara nkwenye Google na ọ gaghị enwe mgbanwe na iwu gam akporo gam akporo Otu mgbe ọtụtụ asịrị.
Gam akporo Otu: Mmalite na mmalite nke ụdị sistemụ arụmọrụ
Chọpụta ihe banyere mmalite na mmalite nke gam akporo Otu nwere kemgbe ọtụtụ afọ na ahịa mba ụwa kemgbe emepụtara ya.
Asus ZenFone 5 mmelite gam akporo achịcha
Chọpụta ihe gbasara mmelite ahụ na gam akporo gam akporo nke enyerelarịrị ndị ọrụ ya na Asus ZenFone 5 na webụsaịtị ndị nrụpụta.
Gam akporo achịcha amalite iru Galaxy S9 na Europe
Chọpụta ihe banyere mmelite gam akporo nke na-abịarute ndị ọrụ na Galaxy S9 na ụfọdụ mba Europe.
Xiaomi Mi 8 Lite malitere ịnata beta nke gam akporo
Chọpụta ihe banyere ọbịbịa nke gam akporo Pie beta maka Xiaomi Mi 8 Lite nke etinyegoro ugbu a na China.
Samsung na-egosi ozi ọma nke One UI na vidiyo
Chọpụta akụkọ niile Samsung na-ewebata na ntanetị ọhụrụ One UI ya na vidiyo nke ụlọ ọrụ ahụ ebugolarị na ọkwa.
Dị nkwụsi ike nke gam akporo gam akporo na-amalite na Xiaomi Mi A1
Chọpụta ihe banyere mbata nke mbipụta kwụsiri nke gam akporo Pie na Xiaomi Mi A1, ụbọchị ole na ole mgbe beta rutere na ekwentị.
Otu esi ehichapụ ngwa site na ihuenyo ụlọ
Ihichapụ ngwa site na ihu igwe nke ọnụ anyị dị nnọọ mfe site na menu menu nke ọdụ anyị na-enye anyị.
Google wepu nkwado maka Android 4 Ice Cream Sanwichi
Chọpụta ihe banyere njedebe nkwado nke Google na-enye gam akporo 4 Ice Cream Sanwichi dịka ụlọ ọrụ ahụ ekwupụtalarị ọkwa.
Ngwunye gam akporo gam akporo BQ Aquaris X2 Pro na Aquaris X2
Chọpụta karịa maka gam akporo Pie beta na-abịa na BQ Aquaris X2 na X2 Pro, akara ekwentị gam akporo Otu.
Samsung na-agbakwunye mkpofu ahịhịa na gallery One UI
Chọpụta karịa gbasara ahịhịa nwere ike ịpụta nke ewebatala na otu UI gallery, Samsung's customization layer.
Egwuregwu Honor bụ ekwentị mbụ nwere Fuchsia OS
Chọpụta karịa gbasara ule ahụ na Honor Play nke ewebata Fuchsia OS karịa gam akporo dị ka sistemụ arụmọrụ.
Otu esi abawanye batrị na gam akporo site na ngbanwe di mfe
Chọpụta mgbanwe dị mfe na nhọrọ ndị nrụpụta ga-eme ka anyị belata oriri batrị na ekwentị gam akporo anyị.
Android Go: Kedu ihe ọ bụ na ihe bụ isi ya. Chọpụta ihe niile banyere ụdị dị iche iche nke sistemụ arụmọrụ gam akporo.
Ngwunye gam akporo gam akporo na-amalite iru Huawei P20 Pro na Europe
Huawei P20 Pro na Europe nwere gam akporo achịcha beta. Choputa ihe banyere imelite igwe na beta a.
Huawei nwalee gam akporo 9.0 achịcha na ekwentị anọ ya
Huawei na-arụ ọrụ na gam akporo 9.0 achịcha maka ekwentị anọ. Chọpụta karịa gbasara mmelite nke akara ndị China na-akwadebe.
BQ ga-emelite ekwentị 10 na gam akporo 9.0 achịcha. Chọpụta ihe banyere igwe ndị ga-enwe ike imelite na ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ.
Samsungfọdụ Samsung phones ga-echere ruo mgbe 2019 iji nweta Android Oreo
Samsung ga-emelite ụfọdụ ekwentị na gam akporo Oreo na 2019. Chọpụta karịa maka usoro mmelite nke ika.
Ndepụta ekwentị nke ga-emelite gam akporo 9.0 achịcha n'oge na-adịghị anya. Chọpụta ụdị niile ga - enweta mmelite ahụ n’oge adịghị anya.
Ekwentị dị mkpa na-emeliterịrị gam akporo 9.0 achịcha. Chọpụta ihe banyere ekwentị ahụ bụ nke mbụ iji nweta mmelite ahụ.
A gam akporo 9.0 achịcha dị ebe a: Chọpụta nkọwa niile. Chọpụta ihe banyere ụdị ọhụụ nke sistemụ arụmọrụ, nke dị taa.
Xiaomi Mi MIX 2S ga-emelite ozugbo na gam akporo P
Xiaomi Mi MIX 2S ga-anata Android P. Chọpụta ihe banyere mmelite ahụ nke ga-abịa na ekwentị n'oge na-adịghị anya.
Versiondị ikpeazụ nke gam akporo P ga-abata na August 20
A ga-ekpughere gam akporo P na August 20 dị ka Evan Blass si kwuo. Chọpụta karịa maka ụbọchị sistemụ arụmọrụ ga-abata.
The OnePlus 3 na 3T ga-enweta Android P
N'oge na-adịghị anya gara aga, OnePlus kwupụtara usoro melite ya, nke na-ekwe nkwa afọ abụọ nke mmelite nkịtị na ...
Android ka bu sistemu eji eme ihe dika Kantar
Gam akporo ka kacha eji sistemụ arụmọrụ. Chọpụta karịa maka ahịa ahịa nke sistemụ arụmọrụ Google.
Gam akporo P Beta 4: Ihe kacha ọhụrụ gam akporo P Preview Dị Ebe a
Android P Beta 4 dị ugbu a ma enwere ike ibudata ya. Chọpụta ihe banyere ụdị sistemụ arụmọrụ gara aga, nke kachasị ọhụrụ ugbu a.
Mmelite a na gam akporo Oreo nke Galaxy A, C na J agaghị abata rue Disemba
Ọ bụghị otu n'ime ụlọ ọrụ ndị, ọ dị nwute, na-elebara mmelite nke ngwaọrụ ha anya na nsụgharị ọhụrụ nke gam akporo. Samsung ka eze bipụtara ụbọchị nke a ga - emelite ụfọdụ n'ime ọnụ ya na gam akporo Oreo, ụbọchị ga - abụ mgbe mwepụtara nke gam akporo P
Android 8.0 Oreo na-amalite ịbata na Galaxy Tab S3. Chọpụta karịa maka mmelite nke bidoro ịbido na mbadamba Samsung nke amaliteworị na United Kingdom.
Android P agaghị agwa gị mgbe ngwa kwụsịrị ịrụ ọrụ
Android P ga-akwụsị ịdọ aka ná ntị mgbe ngwa anaghị arụ ọrụ. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ọhụrụ a nke ewepụtara na sistemụ arụmọrụ nke ga-abata n'afọ a.
Gam akporo Oreo dị na 5,7% nke ngwaọrụ
Naanị 5,7% nke ekwentị nwere gam akporo Oreo dị ka sistemụ arụmọrụ. Chọpụta ihe banyere ahịa mbak nke gam akporo nsụgharị a May.
Ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ dakọtara na gam akporo P gbasaa
Ọnụ ọgụgụ nke ngwaọrụ dakọtara na gam akporo P na beta emeela ka ọ gbasaa, nke mere na ọ bụghị naanị Google Pixels dakọtara na beta ọhụrụ a nke ụdị gam akporo P na-esote.
Akụkọ banyere gam akporo Auto na anyị ga-ahụ na Google I / O 2018
Google na-ekwuwapụta akụkọ ga-abịa na gam akporo Auto. Chọpụta ihe banyere ozi ọma na ụdị nke gam akporo a ga-enweta na Google I / O 2018 a.
Huawei / Honor ẹkedori gam akporo Oreo Beta maka ụdị 7
Huaweilọ ọrụ Huawei ka mepee gam akporo Oreo beta mmemme maka ihe ntanetị 7, nke gụnyekwara ụfọdụ ụdị nsọpụrụ, akara nke abụọ nke ụlọ ọrụ ahụ.
Ihe gam akporo 1.0: Sistemụ arụmọrụ nke Google maka IoT bụ ọkwa ugbu a
Chọpụta karịa maka gam akporo Ihe, sistemụ arụmọrụ nke Google mepụtara maka ngwaọrụ Internetntanetị nke Ihe. E gosiputala usoro ihe a.
Etu esi enweta ọnọdụ Android Oreo na gam akporo ọ bụla
Vidiyo nke m na-akọwa otu esi enwe usoro ọgụgụ Oreo gam akporo na gam akporo ọ bụla, ọbụlagodi na nhọrọ nhazi ka mma karịa arụmọrụ nke ụfọdụ gam akporo.
Google tinye akara ngosi na-egosi na gam akporo P ga-abụ painiapulu
A ga-akpọ Pine gam akporo Pineapple dị ka ọhụụ ọhụụ. Chọpụta ihe banyere njiri mara nke mere ka ị chee na nke a ga-abụ aha ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ.
Gam akporo Oreo dị maka Galaxy S7 na S7 Edge
Mmelite nke gam akporo Oreo nke Samsung Galaxy S7 na Galaxy S7 dịworị na United Kingdom, yabụ ọ gaghị egbu oge iru mba ndị ọzọ.
Sọpụrụ 7X mmelite gam akporo 8.0 Oreo na Project Treble nkwado
Gam akporo 8.0 Oreo na eze na-amalite na-abata na Honor 7X. Chọpụta karịa maka mmelite nke na-abịarute na ekwentị ndị China na ahịa ụfọdụ.
Xiaomi ga-ebido ekwentị abụọ jiri gam akporo One gaa ahịa
Xiaomi ga-ebido ekwentị abụọ na Android One dị ka sistemụ arụmọrụ. Chọpụta ihe banyere atụmatụ ndị China na-eme iji malite ụdị abụọ nke sistemụ arụmọrụ.
Huawei nọ na-arụ ọrụ na sistemụ arụmọrụ ọzọ na gam akporo
Huawei anọwo na-emepe emepe ya. Chọpụta ihe banyere atụmatụ nke akara ika China nke na-ekepụta sistemụ arụmọrụ ya.
LG G6 malitere imelite gam akporo 8.0 Oreo na Korea
LG G6 ga - enweta Android 8.0 Oreo na Korea na Mọnde a. Chọpụta karịa maka mmelite nke afọ gara aga ga-amalite ịnweta Mọnde a.
Fuchsia OS ga-adaba na ngwa gam akporo
Fuchsia OS ga-enwe ndakọrịta na ngwa gam akporo. Chọpụta karịa maka ozi ọma na-akwado na sistemụ nrụọrụ a ga-enwe ike ịnweta ngwa Storelọ Ahịa Play
Ekwentị mkpanaaka na Nougat gafere: Android Oreo ga-abụ nke kacha nta
Ọ dịghị ihe ọzọ mobiles na Nougat: Android Oreo bụ nke kacha nta mbipute. Chọpụta karịa mkpebi Google ịkwụsị asambodo nke gam akporo Nougat igwe.
Galaxy A3 2017 malitere imelite na gam akporo Oreo
Mmelite gam akporo Oreo echere ogologo oge maka Galaxy A3 2017 amalitelarị ịdị maka ndị ọrụ bi na Russia, yabụ na ọ gaghị ewe ogologo oge iru ndị ọzọ Europe.
Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge + na Rịba ama 5 nwere ike ịnweta gam akporo Oreo
Samsung Galaxy S6, S6 Edge, S6 Edge + na Rịba ama 5 ga-enweta gam akporo Oreo. Chọpụta karịa maka mmelite ahụ nwere ike iru na ekwentị ika ahụ.
The Honor 8 na 7X ga-enweta Android 8.0 Oreo… Ma ọ ga-abụ tupu oge okpomọkụ!
Huawei Honor 8 na 7X, dị ka Honor France, ga-enweta Android 8.0 Oreo n'okpuru EMUI 8 tupu oge okpomọkụ nke na-eru nso. Nke a bụ ezigbo akụkọ dịka Honor India ekwuola na mbụ. Anyị na-agbasawanye gị!
Samsung na-ebupụta gam akporo Oreo maka Galaxy S8 na S8 +
Mgbe ichere ihe karịrị ọnwa isii, Galaxy S8 na S8 + emesịa malite ịnata ụdị ikpeazụ nke gam akporo Oreo.
Samsung ga-arụ ọrụ na Android Oreo maka S7, A5 2017, A3 2017 na Tab S3
Samsung ga-emelite Galaxy S7, A3 2017, A5 2017 ma ọ bụ Tab S3 gaa Oreo. Chọpụta karịa gbasara mmelite na-abịa na ekwentị ndị a.
Sony Xperia X na Xperia X kọmpụta emelitere gam akporo 8.0 Oreo
Android 8.0 Oreo na-abịa na Sony Xperia X na Xperia X Compact. Chọpụta karịa gbasara mmelite na-abịa na ekwentị abụọ dị n'etiti akara.
Akụkụ nke gam akporo Oreo, ọnwa ise ka mbido ya, agafeela 1%, na-eguzo na 1,1%, ebe Andoid Nougat ka bụ eze na nnabata gam akporo gam akporo Marshmallow.
Gam akporo P ga-enwe nwa afọ ọrụ idekọ oku. Chọpụta ihe ndị ọzọ atụmatụ Google na-arụ ọrụ ugbu a.
Ndị a bụ Samsung Galaxy nke ga-enweta Android Oreo dịka ọhụụ ọhụrụ
Mụta maka ọhụụ ọhụụ na-agwa anyị nke Samsung ngwaọrụ ga-enweta mmelite na gam akporo Oreo na 2018 a.
Sọpụrụ 9 na Sọpụrụ 8 Pro melite gam akporo Oreo
Gam akporo Oreo na eze na-abịa na Honor 8 Pro na Honor 9. Chọpụta ihe banyere mbata nke mmelite ma Sọpụrụ ekwentị.
A na-emelite OnePlus 5T na gam akporo 8.0 Oreo
The OnePlus 5T amalite mmelite gam akporo 8.0 Oreo. Chọpụta karịa maka mmelite ahụ amaliteworị ịbịaru na ngwaọrụ ndị China.
Xiaomi Mi A1 na-aga n'ihu na-enwe nsogbu mgbe emesịrị gam akporo gam akporo Oreo
Nsogbu nke Xiaomi Mi A1 na gam akporo Oreo ka dị. Chọpụta karịa gbasara mmelite ahụ na ọtụtụ nsogbu ndị ọrụ na-ahụ.
Nkuzi nke m na-egosi gị ebe ebidoghi amata na gam akporo Oreo na m kuzikwara gị otu esi etinye ngwa na nchekwa
Gam akporo Wear 2.9 ga-enwe mpempe akwụkwọ maka ọkwa na-agụghị
Egosipụta ụfọdụ atụmatụ ọhụrụ nke gam akporo Wear 2.9. Chọpụta ihe banyere ozi ọma nke ọhụụ nche ọhụụ na-eweta.
Ihe omume Galaxy S8 beta na-abịa na njedebe
Samsung na-ejedebe ihe omume gam akporo Oreo beta maka Galaxy S8. Chọpụta ihe banyere njedebe nke mmemme beta na ụbọchị mgbe a ga-emelite ekwentị ahụ.
Gam akporo Oreo na eze rutere na Moto X4
Moto X4 malitere ịnabata gam akporo Oreo na eze. Chọpụta ihe maka mmelite dị ugbu a na United States.
Nokia 8 na-anata beta nke gam akporo 8.1 Oreo
Android 8.1 Oreo na-abịa n'ụdị beta na Nokia 8. Chọpụta ihe maka mmelite dị ugbu a maka ekwentị Nokia dị elu.
Gam akporo 8.1. ga-egosiputa oso nke netwok WiFi ghe oghe tupu ijiko
Gam akporo 8.1. Ọ ga-akụziri gị ọsọ nke a na-emeghe WiFi netwọk. Chọpụta ihe banyere njirimara ọhụrụ na-abịa na ụdị ọhụrụ nke sistemụ arụmọrụ Google.
A kwes Samsungr Samsung Samsung Galaxy J8 leaks na gam akporo 8.0 Oreo
Na nso nso a, na GFXBench na GeekBench a Samsung abanyela na ngwaọrụ Samsung, ọ nwere ike ịbụ Galaxy J8 ma ọ bụ, ọ bụrụ na, ọ bụ naanị ụdị J7 ka mma na gam akporo 8.0 Oreo yana ụfọdụ nkọwa ndị ọzọ ga-etinye ya n'etiti- nso nke ụlọ ọrụ South Korea.
Gam akporo Oreo melite maka Galaxy S6 nwere ike ịbata tupu Febụwarị
Ọzọ anyị na-ekwu maka ezigbowanye ohere na Samsung Galaxy S6 na-emelite ya na gam akporo Oreo. Akụkọ asịrị na-ekwu na a ga-ewepụta ya tupu ọnwa Febụwarị
Gam akporo Wear 2.8 dị ebe a ma weta ozi ọma
Gam akporo Wear 2.8 bụ eziokwu ma hapụ ọtụtụ akụkọ. Chọpụta ihe banyere akụkọ na-abịa na mmelite nke elekere.
The Honor 8 agaghị enweta mmelite na gam akporo Oreo
The Honor 8 na-agba ọsọ nke update gam akporo Oreo. Chọpụta karịa ihe kpatara ekwentị gị agaghị enwe ike imelite.
Galaxy J7 Prime na Galaxy Tab E ga-emelite na gam akporo 8.0 Oreo
Samsung Galaxy J7 Prime na Galaxy Tab E ga-emelitekwa na gam akporo 8.0 Oreo, dịka onye ọrụ T-Mobile kwadoro.
Gam akporo Oreo beta na-abịa Huawei P10 na P10 Plus
Huawei P10 na P10 Plus na-enweta gam akporo Oreo beta. Chọpụta karịa banyere mbata nke sistemụ beta na Huawei's high-end.